ब्रेकिङः वीपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. रौनियार ८ लाख घुस सहित पक्राउ – Makalukhabar.com
ब्रेकिङः वीपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. रौनियार ८ लाख घुस सहित पक्राउ
२०७६ असार २७ गते ८:४२
असार २६, धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्तिष्ठान धरानका उपकुलपति राजकुमार ९आरके० रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष टोलीले उनलाई प्रतिष्ठानकै सरकारी निवासबाट घुससहित पक्राउ गरेको हो ।
भवन निर्माणको भुक्तानीका लागि उनले घुस लिएका थिए । घुस लिएर उनले भजिता रामहरि रौनियारलाई राख्न दिएका अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए। प्रतिष्ठानमै पढ्ने रामहरिको कोठाबाट घुस बरामद भएकोको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको ठेक्कामा कमिशनको नाममा घुस मागिरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट गएको टोलीले दुवैजनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवैजनालाई अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।
निर्मला हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेको भन्दै प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
हिटचरणबाटै बाहिरिए पौडी खेलाडी एलेक्स
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपालाई दलको मान्यता‚ सरकारले हटायो दोहोरो थ्रेसहोल्ड
नेपालमा फेला पर्‍यो कोरोनाको ‘डेल्टा प्लस’ भेरियन्ट
३८९९ संक्रमित थपिए, कोरोनामुक्त र मृतकको संख्या कति ?
चिरायु राष्ट्रिय अस्पतालमा अनलाइनबाट ‘अपोईन्टमेन्ट’ लिन सकिने